प्रवचन, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
तपाईंले सोध्नु भएको होला, "प्रवचन भनेको के हो?"
सरल जवाफ: एक भाषण। एउटा कुराकानी र धेरै सुन्छन्। यस भाषणको उद्देश्य बाइबलका पुराना पदहरू बुझनीय बनाउनु हो। यसले प्रश्नको उत्तर पनि समावेश गर्दछ: यस्तो पुरानो पाठले मेरो र मेरो जीवनसँग के गर्छ? जो कोही यो प्रश्न गम्भीरतापूर्वक सोध्छन् छक्क पर्नेछ बाइबल कसरी अप-टु-डेट छ भनेर। यो भाषणले हाम्रो जीवन जस्तो आवेगहरू पनि दिन चाहन्छ (भगवान संग) राम्रो सफल हुन सक्छ।
यसको मतलब के हो? यहाँ एक तुलना छ: यदि तपाईं आज एक प्राविधिक उपकरण खरीद गर्नुहुन्छ, यो प्रयोगको लागि निर्देशनहरूको साथ आउँदछ। यसले कसरी फ्ल्याट स्क्रिन वा नेभिगेसन उपकरण अपरेट गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ। यस्तो निर्देशन म्यानुअल बिना तपाईं धेरै पुरानो देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्राविधिक उपकरण भन्दा जीवन धेरै जटिल छ। तपाईंले समय-समयमा मद्दत र सुझावहरू किन लिनुहुन्न जसले गर्दा यसले अझ राम्रो काम गर्दछ?
विकिपीडिया उपदेशको बारेमा निम्न परिभाषा दिन्छ:
प्रवचन (lat। praedicatio) एक धार्मिक समारोहको सन्दर्भमा एक भाषण हो, अधिकतर धार्मिक सामग्रीको साथ। नयाँ नियम र इसाई उपासनामा उपदेशको विशेष स्थान छ। इसाई धर्मशास्त्रमा प्रवचनको शिक्षालाई होमिलेटिक्स भनिन्छ। अंग्रेजी र फ्रेन्चमा उपदेशको अर्थ "प्रवचन" हो। (ल्याट। सेर्मोबाट: भाषण परिवर्तन, कुराकानी; व्याख्यान)।
ब्रायन चैपलले आफ्नो पुस्तक "क्रिष्ट-केन्द्रित प्रचार" मा लेखेका थिए:
धर्मशास्त्रको प्रत्येक पाठलाई ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरको अनुग्रहसँग सम्बन्धित भनिएको छ। केही पदहरूले येशूको निम्ति मुक्तिको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गरेर तयार गर्दछन्। अन्य पदहरूले ख्रीष्टको आगमनको भविष्यवाणी गर्दछन्। अझै अरूले ख्रीष्टमा मुक्ति को पक्षहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्। तर अन्य पदहरूले येशूमा भएको छुटकाराको नतीजालाई चित्रण गर्दछ, जसको अर्थ येशूको अनुग्रहबाट धेरै आशिषहरू पाइन्छन्। नयाँ करारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध देख्न सकिन्छ।